Avelao ny domaine ho an'ny ataonao | Martech Zone
Alatsinainy Janoary 19, 2009 Talata, Oktobra 7, 2014 Douglas Karr
Firy ny olona mitady olona mahalala manao izany ianao? Ankehitriny… olona firy no mijery ho anao?
Ka… raha irinao ny ho hita amin'ny Internet amin'ny inona manao izany ianao, maninona ianao no mividy ny anaranao amin'ny maha domaine nomera anao ary mametraka bilaogy eo aminy? Mety tsy tianao izany. Mividiana anarana domain izay maneho an'izay manao izany ianao. Mandra-pahafantaran'ny olona hoe iza ianao, izany no hahitan'izy ireo anao.
Rehefa mahazo atiny ampy sy manaraka ianao dia hikarakara ny Google avelao izy ireo hahita anao.
Tags: lolom-po marikamailakaNy fahatsapana voalohanyquery_postslolom-poyougov
Jan 19, 2009 ao amin'ny 12: 34 AM
Torohevitra tsara. Heveriko fa mety meloka tamin'ny fanaovako an'io zavatra io ihany. Angamba naniry ny hanangana ny "marika" ahy manokana na ny fahitako ny olon-kafa nanao azy! Mahatonga ahy hieritreritra indroa! Misaotra noho ilay lahatsoratra manahirana!
Torohevitra tsara Doug. Ity angamba no torohevitra voalohany homeko izay rehetra mametraka tranokala. Ohatra… raha mivarotra popcorn ianao ary ny anaran'ny orinasanao dia toy ny natural Harvest na zavatra toa izany. Maka ny anarana http://naturalharvest.com dia mety ho hevitra tena ratsy amin'ny fomba fijery marketing. Ho sarobidy kokoa noho izany ny fananana http://popcorn.com . Azoko antoka fa samy nalaina avokoa ireo URL ireo, saingy azonao ilay hevitra.
Jan 19, 2009 ao amin'ny 11: 53 AM
Niady mafy tamin'io aho tamin'ny vao nanomboka nametraka ny tranokalako. Nanapa-kevitra ny handeha amin'ny "Inona" aho fa tsy ny "Me" satria fantatro fa tsy tiako ny ho toerana hamelomako fiainana, fa loharanom-pahalalana ho an'ny olon-kafa. Heveriko fa dingana iray lehibe amin'ny fizotran'ny drafitra. Tsotra ny torohevitrao ary misy dikany tanteraka!
19 Jan 2009 amin'ny 3:58 PM
Manaiky aho, azoko hoe maninona ny olona mety te hividy ny anarany, fa raha tsy efa manana ny fahefana anananao ianao, inona no antony? Ny URL-nao dia tokony haneho taratra ny karazana tranokala / bilaogy ary inona no antenain'ny mpamaky.